Rida Boldenone cypionate poids (106505-90-2) hplc≥XUMX% | AASraw
/ Products / Anabolika Steroids / Boldenone Powder Series / Boldenone cypionate poids
SKU: 106505-90-2. Sokajy: Boldenone Powder Series, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mamorona sy ny famokarana maimaimpoana avy amin'ny gram ka hatramin'ny baikom-paritra Boldenone cypionate (106505-90-2), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Boldenone, fantatra amin'ny anarana hoe testosterone 1, dia steroid anabolic-androgenic steroid (AAS) sy ny 1 (2) -dehydrogenated analogue of testosterone. Boldenone mihitsy no mbola tsy nividy; Amin'ny fampiasana fanafody famonoana fanafody, dia ampiasaina izy io toy ny boldenone undecylenate, ny esdecylenate ester.
Boldenone cypionate video vidéo
Boldenone cypionate dite fototra karazany
Formula Molecular: C26H38O3
Meny fitetezana 398.58
Color: Volo fotsy na fotsy mavo na fotsy mavo
Raw Boldenone cypionate fampiasana vovoka amin'ny steroids cycle
Boldenone cypionate, antsoina hoe Bold Cyp. Ny Estera cypionate amin'ny boldenone dia hanao ny fanafihana toy ny amin'ny testoserone. Ny fampieritreretana azy dia ho toy izany ihany koa rehefa rava ihany koa izany.
Raw Boldenone cypionate poids Usage
Ny Equipoise dia ampiasain'ny atleta sy biriky mba hampitombo ny fiaretana, ny hozatra ary ny famokarana ny rà mena ao amin'ny vatana. Amin'ny fampiasana ara-pahasalamana, ny equipoise dia afaka mampiroborobo ny erythropoietin (EPO) izay mamporisika ny fitomboan'ny tsokan'ny taolana izay mitarika amin'ny famokarana sela mena. Ho an'ny lehilahy dia ny 400-600mgs isaky ny herinandro. Ho an'ny vehivavy dia ny 25-50mgs isaky ny herinandro, nefa mila mitandrina tsara ianao. Raha mahita fiantraikany mahery vaika ianao.
Fampitandremana momba ny vovobon-tsoavaly Boldenone
Ny cypionate Boldenone dia tsy manana hery mangeza ambony. Raha azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava kokoa ny dose ambony dia mety ilaina ny mampiasa antiestrogens na tohibitors toy ny arimidex. Ny fiantraikany androgenika dia tsy ambony satria ambany ny androgenicity. Izany dia mahatonga azy io ho varo-tena tena azo ampiasaina ho an'ny vehivavy. Na dia misy aza ny dosie avo kokoa dia misy ny mety ho fiantraikany eo amin'ny fiantraikany hafa toy ny akne sy ny hoditra.
Boldenone dia steroid anabolic androgenic most commonly used in veterinary environment than in the treatment of human beings.
Ny Bolideone Cypionate, tahaka ny steroid hafa anabolic hafa, dia natao hanesorana ny vokatry ny testosterone.
Raw Boldenone cypionate powder marketing
Ahoana ny hividianana vovoka Cypionate Boldenone avy ao AASraw
1. Mba hifaneraserantsika amin'ny rafitra fanadihadianay mailaka, na solontenan'ny mpanjifa amin'ny aterineto skype (CSR).
2. Hanolotra anay ny habetsahana sy ny adiresinareo.
3. Ny CSR dia hanome anao ny teny nindramina, ny fandoavam-bola, ny laharan-tariby, ny fomba fitaterana ary ny daty fahatongana (ETA).
4. Ny sandam-bola vita sy ny entana dia alefa amin'ny ora 12 (Ho an'ny filaminana ao amin'ny 10kg).
5. Fananana voaray sy manome valin-teny.
Boldenone Cypionate Recipes